सुशान्त सिंह राजपूतको प्रकरणले लियो नयाँ मोड - Prathana Media
सुशान्त सिंह राजपूतको प्रकरणले लियो नयाँ मोड
सुशान्त सिंह राजपूतको प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ, सुशान्तका पिता के के सिंहले पटनाको राजिव नगरस्थित प्रहरी कार्यालयमा सुशान्तकी प्रेमिका रियावि रुद्ध देह त्याग गर्न उक्साएको भन्दै आरो पपत्र दर्ज गरेपछि सो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो । मुम्बई पूलिसको अनुसन्धानबाट असन्तुष्ट केकेले सुशान्तकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवती र अन्य २ जनालाई देहत्याग गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरीले रियाको रिुद्धमा आइपीसीको धारा ३४१, ३४२, ३८०, ४०६, ४२०, ३०६, ५०६ र १२० अन्तर्गत एफआइआर (नम्बर २४१/२०) दर्ता गरेको छ ।
भारतीय मिडियाले जनाए अनुसार उनले लगाएका १० आरोप:
१ : सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले भनेका छन् सन् २०१९ अघि मेरो छोरा सुशांतलाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक समस्या थिएन, रिया चक्रवर्तीको सम्पर्कमा आउँदा अचानक के भयो, सुशांत सिंहलाई मानसिक विचलित बनाउन उनले त्यस्तो के गरिन् ?
२ : यदि सुशांत सिंह राजपूतको मस्तिष्कको उपचार भैरहेको थियो भने किन उनको परिवारबाट कुनै लिखित वा मौखिक अनुमति लिइएको छैन। किनभने जब कोही मानसिक रूपले बिरामी छ, उसको सबै अधिकार उसको परिवारसँग छ, यसको अनुसन्धान गरिनु पर्छ।
३: मेरो छोरा सुशांत सिंहको संरक्षकको रुपमा रिया चक्रवर्तीलाई किन ब्यवहार गरियो ? मलाई लाग्छ यी डाक्टरहरू पनि रियाको सबै षडयन्त्रमा संलग्न थिए। यसको अनुसन्धान गरिनु पर्छ किन उनीहरुले परिवारको अनुमति विना उपचार गरे । मेरो छोरालाई कुन औषधि दिइयो यस बारे थाहा हुनुपर्दछ।
४ : जब रियाले थाहा पाइन् कि सुशांत सिंह राजपूतको मानसिक अवस्था खराब छ, यस अवस्थामा उनीले एक्लै उपचारको जिम्मा लिने मेरो छोराको उपचाको सबै किन लगिन् ? उनले त्यहि समयमा, मेरो छोरालाई त्यो नाजुक अवस्थामा छोडेर हिडिन् र ऊसँगको सबै सम्पर्क अन्त्य समेत गरिन् , त्यसैले मेरो छोरोले देह त्याग गर्‍यो।
५ : सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले भने कि मेरो छोरा फिल्मको रेखा छोडेर केरलामा जैविक खेती गर्न चाहन्थ्यो, उसको साथी महेश उनीसँग जान तयार थिए, तब रियाले विरोध गरिन् र उसलाई कतै जान दिइनन् । यदि उनले भनेको नमानेर मेरो छोरा गएभने आफुसंग भएका सबै मेडिकल रिपोर्ट समेत मिडियालाई दिने ध म्की दिइन् । उसको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सबै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइन् ।
६: रिया चक्रवर्तीको बैंक ब्यालेन्स पनि कम हुँदै गइरहेको थियो, त्यसैले रियालाई लाग्यो कि सुशान्त अब उनको लागि कुनै काम लाग्दैन । यस पछि जून ८ सम्म रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूतसँगै बसिन् र सबै नगद, गहना, ल्यापटप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड र उसको पिन नम्बर, सबै आवश्यक कागजात र सुशान्तको उपचार कागजात लिएर घर गइन्।
७ : रिया चक्रवर्तीले उनको फोनमा सुशांत सिंह राजपूतको फोन नम्बर ब्लक गरेकी थिइन् । यस पछि सुशांतले आफ्नी बहिनीलाई बोलाए र उनले भने रियाले मलाई कतै अप्ठेरोमा पार्नेछ । उनी यहाँबाट मलाई छोडेर गएकी छन् । मलाई ध म्की पनि दिएकी छन् यदि तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ भने तिम्रा सबै कागजातहरू मिडिया सामु सार्वजनिक गरिदिन्छु । तिमीलाई पागल सावित गरिदिन्छु ।
८ : सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ूजून ८ मा, सुशांतले सँग गोप्य रूपमा राखेको दिशा नामकी सेक्रेटरीले देह त्याग गरेपछि जस पछि मिडियामा धेरै समाचारहरू फैलिन थाल्यो । यो विषयले पनि छोरालाई नकारात्मक असर पर्यो । त्यती बेला सहाराको लागि मेरो छोराले रियालाई सम्पर्क गर्न कडा परिश्रम गर्यो तर रियाले मेरो छोराको नम्बर ब्लक गरेकी थिइन् । मेरो छोरा भित्र गहिरो चिन्ता थियो कि रियाले उनलाई कुनै आरोप नलगाउन् । सुशान्तलाई दिशाको निधनमा पनि आफुलाई रियाले जिम्मेवार बनाउँछ की भन्ने शंका थियो ।
९ : मेरो छोराको कोटक महिन्द्राको बैंक खातामा करिब करोड रुपैयाँ थियो, पछिल्लो बर्षमा केहि करोड निकालिएको थियो । तर त्यो पैसा निकाल्न मेरो छोरासंग कुनै अनुमति लिइएन । मेरो छोराको सबै खाता जाँच गरिनु पर्छ। यी बैंकबाट कति पैसा आएको थियो क्रेडिट कार्ड रिया चक्रवर्तीले आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग ठगी र षडयन्त्र गरेर प्रयोग गरे ।
१० : यस घटना हुनु अघि सुशांत सिंह राजपूत अभिनयको संसारमा एक ठूलो नाम थियो, त्यसोभए के कारण छ कि रियाको आगमन पछि, सुशांत सिंहको फिल्म कम हुँदै गयो । यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
सुशान्तसिंह राजपुतका बुवाले आफ्नो छोरालाई देह त्याग गर्न बाध्य पारेको भन्दै उजुरी दिएपछि सुशान्तको पूर्वप्रेमिका अंकिता लोखंडेले प्रतिकृया जनाएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सत्यले जित्ने भन्दै स्टाटस लेखेकी छन् ।
पिताको उजुरीमा रिया र उनको परिवारमाथि सुशान्तलाई परिवारबाट अलग गर्ने प्रयास गरेको, परिवारबाट टाढा राख्न नम्बर नै परिवर्तन गरिदिएको, सुशान्तमाथि नियन्त्रण राख्न उनका पुरै कर्मचारी परिवर्तन गरेको, सुशान्तको अकाउन्टबाट पैसा निकालेको र ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई पागल सावित गर्न चिकित्सकसंग मिलेको आ रोप पनि केकेले लगाएका छन् ।
सुशान्तको उपचार हुँदा परिवारका सदस्यलाई त्यसको जानकारी नदिइएको भन्दै र सुशान्तलाई उपचारको कागजपत्र सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्दै ध म्की दिने गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । सुशान्तका पिताले आफ्नो छोरालाई ब्ल्यामेल गरेर ध म्की दिएर देह त्याग गर्न बाध्य पारेको आ रोप समेत लगाएका छन्।
भाग्य र पुण्यको टोलीले म माथि दुर्ब्यबहार गर्यो, लाईभमा रुदै पुष्पा (भिडियो)
भाग्य र पुण्यको टोलीले म माथि दुर्ब्यबहार गर्यो, लाईभमा रुदै…